Dowladda Burundi oo qarka u saaran inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Dowladda Burundi oo qarka u saaran inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxa uu yiri: Ururadan iyo cadowga waddanka waxay rabaan inay muran ka dhex abuuraan ciidamada iyo dalalkooda, iyagoo markaasi sameynaya wax aan lagu fakari karin, inay si toos ah u siiyaan kharashaadkooda. Haddii ay xadkaasi kala qeybinta ee annaga iyo ciidamadeenna ay soo dhaafaan, shaki kuma jiro waxaan dib ugu soo celin doonnaa dalka. Waa innaga kuwa u direy halkaasi. Ma ahan iyaga kuwa direy ama qorey. Marka ay Soomaaliya joogaan oo ay la dagaallamayaan Shabaab, waxay taasi u sameynayaan sharafta qarankeenna.
Wasiirka ayaa sheegay in muddo toban bilood ah aanan ciidamada la siin wax mushaaraad ah. Dhowaan ayaa Midowga Yuurb uu dowladda Kenya u diray lacag ka mida dhowr bilood oo ka maqnaa ciidamada dalka Kenya ee ku sugan Soomaaliya.
Previous articleXilliga ay dhaceyso Doorashada Senatoorada Aqalka Sare ee Hirshabeelle oo la shaaciyay
Next articleMadaxweyne Xasan Sheekh oo farriin u diray C/weli Gaas iyo C/kariin Guuleed